'तराईलाई पहाडबाट अलग्याउन सकिँदैन’
संघीयता मार्फत देश पहिलो पटक एकीकरण हुन लागेको हो। त्यो संघीयतालाई बिखण्डन भन्ने। एकात्मक व्यवस्था महँगो हो। सस्तो त संघीयता हो। उल्टै संघीयता धान्न सकिन्न भन्ने। केपी उल्टो उल्टो कुरा गर्छ। मधेस राज्य बनेर राष्ट्रियता बलियो हुने हो। किनभने अहिलेसम्म राज्यको अंग नबनाइएको मधेसी लाई संघीयता ले राज्य मा समेट्नेछ। "स्वायत्त मधेस प्रदेश" अंतरिम संविधानमा रहेको कुरा केपी ले नमानेर हुने भए।
जात को कुरा गर्नु छैन भने किन नेपाली बोलेको? अँग्रेजी बोल। नेपाली त जातीय भाषा हो। किन बाहुन बाहुन ठुँसेको तिम्रो केन्द्रीय समिति मा? त्यस्तो जातीय व्यवहार किन?